အိမ်ထောင်ကျပြီဆိုရင် မိန်းမတွေ အဖြစ်မနေ လျှို့ဝှက်ထားတတ်တဲ့ အချက်များ - APANNPYAY
Home / ဗဟုသုတအစုံ / ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ / အိမ်ထောင်ကျပြီဆိုရင် မိန်းမတွေ အဖြစ်မနေ လျှို့ဝှက်ထားတတ်တဲ့ အချက်များ
အိမ်ထောင်ကျပြီဆိုရင် မိန်းမတွေ အဖြစ်မနေ လျှို့ဝှက်ထားတတ်တဲ့ အချက်များ
Apann Pyay 1:40 PM ဗဟုသုတအစုံ , ဘ၀နှင့်အချစ်ကဏ္ဍ Edit
လက်ထပ်ပြီးနောက်မှာ သူ့ဘဝ ကိုယ့် ဘဝ မခွဲခြားပဲ ပစ္စည်းတွေကို အတူတူသုံးစွဲတာ၊ လျှို့ဝှက်ချက် မထားတာဟာ ဘဝပျော်ရွှင်ဖို့ အထောက်အကူ ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အရမ်းချစ်တဲ့ ချစ်သူ ဆီကတောင် မိန်းကလေးတွေ လျှို့ဝှက်ထားတတ်တာတွေ ရှိပါတယ်။ အထင်မလွဲပါနဲ့။ ကျွန်တော်တို့မှာလဲ ရှိတတ်ကြတာပါပဲ။ ကျွမ်းကျင်သူတွေက မိန်းမတွေ လျှို့ဝှက်ထားတတ်တဲ့ အရာ ၅ မျိုးကို ထုတ်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
၁. ကျန်းမာရေး ပြသနာများ မိန်း မတစ်ယောက်ဟာ ရင်သားထဲမှာ အလုံးတွေ့တာလိုမျိုး ကျန်းမာရေးပြသနာ တစ်ခုခု ရှိလာရင် အဲဒါကို ပြောမပြတတ်ပါဘူး။ အမျိုးသမီး တွေက သူတို့လင် စိတ်ဖိစီးမှာစိုးလို့ ကျန်းမာရေးပြသနာ အကြီးကြီးဆိုရင်တောင် ပြောမပြတတ်ကြပါဘူး။ တိတ်တိတ်လေးနေပြီးမေ့ထားတာဟာ ကောင်းတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။အမှန်တကယ်တော့ အဲဒါဟာ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် လှည့်စားပြီး သူ့အပူတွေကို သူ့ယောက်ျားမမြင်အောင် ပိတ်ဆို့ထားတာပါပဲ။ အဲဒါကြောင့် ရောဂါကို ပေခံမနေပါနဲ့။ ပြောပြလိုက်ပါ။ သူ့ပခုံးပေါ် မှီနေလိုက်ပါ။ လင်မယားဆိုတာ ပြသနာတွေကို နှစ်ယောက် ရင်ဆိုင်ဖို့ လုပ်ထားတာပါ။
၂. ချစ်ဇာတ်လမ်းက ပြသနာတွေဘယ်နေရာမှာ အိမ်ဝယ်မယ်ဆိုတာ သဘောထားကွဲလွဲတာ၊ ကလေးယူဖို့ သဘောထားကွဲလွဲတာတွေလိုမျိုးပါ။ တကယ်လို့ အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ဟာ အဲဒိပြသနာမျိုးတွေကို သူ့ယောက်ျားနဲ့ နှစ်ယောက် မဖြေရှင်းနိုင်ဘူးထင်ရင် တရားစခန်း တွေ သွားတတ်ပါတယ်။ သူတို့တွေက ဒီဇာတ်လမ်းကို အဆုံးသတ်သင့်မသင့် ဝေခွဲမရလို့ပါ။တစ်ယောက်ခြင်းစီ တရားစခန်းဝင်တာထက်စာရင် အိမ်မှာ နှစ်ယောက်တူတူတရားထိုင်တာ၊ ယောဂကျင့်တာက ပိုကောင်းပါတယ်။ အဲဒါက နှစ်ယောက်စလုံးကို ပိုပြီး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် နားလည်စေပါတယ်။
၃. လိင်ကိစ္စမှာ အကြိုက်လေးတွေအမျိုးသမီးတွေဟာ လိင်ကိစ္စအကြောင်း ပြောခဲပါတယ်။ လိင်ကိစ္စမှာ ရှက်ရွံတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် လိင်ကိစ္စမှာ စိတ်ကျေနပ်မှုမရတဲ့ မိန်းမတွေ အရမ်းများပါတယ်။ သူတို့ မကြိုက်တဲ့ ပုံစံတွေကို သူ့ယောက်ျားကို ပြောမပြချင်ကြပါဘူး။အဲဒါဟာ သူ့ယောက်ျားကြိုက်နေရင် ပြီးတာပဲဆိုတဲ့ စိတ်ကြောင့်ပါ။ အဲဒါကြောင့် ကိစ္စ မစခင် အခန်းပြင်မှာကတည်းက ကြိုပြီး ဆွေးနွေးထားပါ။ သူ့အကြိုက်ကိုယ့်အကြိုက် လေးတွေကိုပေါ့။ မရှက်ပါနဲ့။
၄. ကိုယ်ပိုင် အောင်မြင်မှုလေးတွေ အမျိုးသမီး တွေဟာ အလုပ်မှာ ရာထူးတိုးတာမျိုးကို အိမ်မှာ အောင်ပွဲမခံတတ်ကြပါဘူး။ သူတို့က သူတို့ လင်ယောက်ျား တွေနဲ့ အလုပ်ကိစ္စနဲ့ ပါတ်သတ်ပြီး အပြိုင်အဆိုင် မဖြစ်ချင်ကြလို့ပါ။ အဲဒါကြောင့် အလုပ်အောင်မြင်မှုတွေကို လျှို့ဝှက်ထားတတ်ပါတယ်။တက်ာတော့ ဘယ်သူက လစာ ပိုများများရလဲဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး။ အရေးကြီးတာကသင့်ရဲ့ အောင်မြင်မှု တွေကို သင့်ယောက်ျားလဲ ပျော်ပါတယ် ဆိုတာပါ။ သူတို့က မိန်းမတွေမဟုတ်ပါဘူး။ တိတ်တခိုး အားကျ မနာလို ဖြစ်မနေတတ်ပါဘူး။
၅. ဘဏ်စာရင်း အမျိုးသမီး တွေမှာ ကိစ္စအမျိုးမျိုးအတွက် လျှို့ဝှက် ဘဏ်အကောင့် တွေ ရှိတတ်ကြပါတယ်။ တချို့တွေဆို ချစ်ဇာတ်လမ်းမအောင်မြင်ရင် အဆင်ပြေဖို့ပါ စုထားတတ်ကြပါတယ်။ အဲဒါဟာ သူတိုိ့ကို လုံခြုံစိတ်ချမှုကို ခံစားမိစေပါတယ်။ တကယ်လို့ သင့် ယောက်ျား တွေ့သွားရင်တော့ သူစိတ်ဆိုးမှာပါ။ သင့်မှာ တခြား လျှို့ဝှက်ချက် တွေ ရှိတယ်လဲ ထင်သွားမှာပါ။ငွေကြေးဆိုတာ အိမ်ထောင် တစ်ခုမှာ အကြီးဆုံးစိုးရိမ်ရမယ့်အရာပါ။ အဲဒါကြောက့် ဘာပဲဖြစ်နေနေ သင့်ယောက်ျားနဲ့ ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းတာ အကောင်းဆုံးပါ။ လျှို့ဝှက်ချက် တွေဟာ အိမ်ထောင်ရေး ကို ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း နေပါလို့ အကြံပေးပါရစေ။
Credit : Kyawkyawsoe
လကျထပျပွီးနောကျမှာ သူ့ဘဝ ကိုယျ့ ဘဝ မခှဲခွားပဲ ပစ်စညျးတှကေို အတူတူသုံးစှဲတာ၊ လြှို့ဝှကျခကျြ မထားတာဟာ ဘဝပြျောရှငျဖို့ အထောကျအကူ ပွုပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အရမျးခဈြတဲ့ ခဈြသူ ဆီကတောငျ မိနျးကလေးတှေ လြှို့ဝှကျထားတတျတာတှေ ရှိပါတယျ။ အထငျမလှဲပါနဲ့။ ကြှနျတျောတို့မှာလဲ ရှိတတျကွတာပါပဲ။ ကြှမျးကငျြသူတှကေ မိနျးမတှေ လြှို့ဝှကျထားတတျတဲ့ အရာ ၅ မြိုးကို ထုတျပွလိုကျပါတယျ။ အဲဒါတှကေတော့
၁. ကနျြးမာရေး ပွသနာမြား မိနျး မတဈယောကျဟာ ရငျသားထဲမှာ အလုံးတှတေ့ာလိုမြိုး ကနျြးမာရေးပွသနာ တဈခုခု ရှိလာရငျ အဲဒါကို ပွောမပွတတျပါဘူး။ အမြိုးသမီး တှကေ သူတို့လငျ စိတျဖိစီးမှာစိုးလို့ ကနျြးမာရေးပွသနာ အကွီးကွီးဆိုရငျတောငျ ပွောမပွတတျကွပါဘူး။ တိတျတိတျလေးနပွေီးမထေ့ားတာဟာ ကောငျးတယျလို့ ထငျကွပါတယျ။အမှနျတကယျတော့ အဲဒါဟာ ကိုယျ့ဘာသာကိုယျ လှညျ့စားပွီး သူ့အပူတှကေို သူ့ယောကျြားမမွငျအောငျ ပိတျဆို့ထားတာပါပဲ။ အဲဒါကွောငျ့ ရောဂါကို ပခေံမနပေါနဲ့။ ပွောပွလိုကျပါ။ သူ့ပခုံးပျေါ မှီနလေိုကျပါ။ လငျမယားဆိုတာ ပွသနာတှကေို နှဈယောကျ ရငျဆိုငျဖို့ လုပျထားတာပါ။
၂. ခဈြဇာတျလမျးက ပွသနာတှဘေယျနရောမှာ အိမျဝယျမယျဆိုတာ သဘောထားကှဲလှဲတာ၊ ကလေးယူဖို့ သဘောထားကှဲလှဲတာတှလေိုမြိုးပါ။ တကယျလို့ အမြိုးသမီး တဈယောကျဟာ အဲဒိပွသနာမြိုးတှကေို သူ့ယောကျြားနဲ့ နှဈယောကျ မဖွရှေငျးနိုငျဘူးထငျရငျ တရားစခနျး တှေ သှားတတျပါတယျ။ သူတို့တှကေ ဒီဇာတျလမျးကို အဆုံးသတျသငျ့မသငျ့ ဝခှေဲမရလို့ပါ။တဈယောကျခွငျးစီ တရားစခနျးဝငျတာထကျစာရငျ အိမျမှာ နှဈယောကျတူတူတရားထိုငျတာ၊ ယောဂကငျြ့တာက ပိုကောငျးပါတယျ။ အဲဒါက နှဈယောကျစလုံးကို ပိုပွီး တဈယောကျကိုတဈယောကျ နားလညျစပေါတယျ။
၃. လိငျကိစ်စမှာ အကွိုကျလေးတှအေမြိုးသမီးတှဟော လိငျကိစ်စအကွောငျး ပွောခဲပါတယျ။ လိငျကိစ်စမှာ ရှကျရှံတတျကွပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ လိငျကိစ်စမှာ စိတျကနြေပျမှုမရတဲ့ မိနျးမတှေ အရမျးမြားပါတယျ။ သူတို့ မကွိုကျတဲ့ ပုံစံတှကေို သူ့ယောကျြားကို ပွောမပွခငျြကွပါဘူး။အဲဒါဟာ သူ့ယောကျြားကွိုကျနရေငျ ပွီးတာပဲဆိုတဲ့ စိတျကွောငျ့ပါ။ အဲဒါကွောငျ့ ကိစ်စ မစခငျ အခနျးပွငျမှာကတညျးက ကွိုပွီး ဆှေးနှေးထားပါ။ သူ့အကွိုကျကိုယျ့အကွိုကျ လေးတှကေိုပေါ့။ မရှကျပါနဲ့။
၄. ကိုယျပိုငျ အောငျမွငျမှုလေးတှေ အမြိုးသမီး တှဟော အလုပျမှာ ရာထူးတိုးတာမြိုးကို အိမျမှာ အောငျပှဲမခံတတျကွပါဘူး။ သူတို့က သူတို့ လငျယောကျြား တှနေဲ့ အလုပျကိစ်စနဲ့ ပါတျသတျပွီး အပွိုငျအဆိုငျ မဖွဈခငျြကွလို့ပါ။ အဲဒါကွောငျ့ အလုပျအောငျမွငျမှုတှကေို လြှို့ဝှကျထားတတျပါတယျ။တကျာတော့ ဘယျသူက လစာ ပိုမြားမြားရလဲဆိုတာ အရေးမကွီးပါဘူး။ အရေးကွီးတာကသငျ့ရဲ့ အောငျမွငျမှု တှကေို သငျ့ယောကျြားလဲ ပြျောပါတယျ ဆိုတာပါ။ သူတို့က မိနျးမတှမေဟုတျပါဘူး။ တိတျတခိုး အားကြ မနာလို ဖွဈမနတေတျပါဘူး။
၅. ဘဏျစာရငျး အမြိုးသမီး တှမှော ကိစ်စအမြိုးမြိုးအတှကျ လြှို့ဝှကျ ဘဏျအကောငျ့ တှေ ရှိတတျကွပါတယျ။ တခြို့တှဆေို ခဈြဇာတျလမျးမအောငျမွငျရငျ အဆငျပွဖေို့ပါ စုထားတတျကွပါတယျ။ အဲဒါဟာ သူတို့ကို လုံခွုံစိတျခမြှုကို ခံစားမိစပေါတယျ။ တကယျလို့ သငျ့ ယောကျြား တှသှေ့ားရငျတော့ သူစိတျဆိုးမှာပါ။ သငျ့မှာ တခွား လြှို့ဝှကျခကျြ တှေ ရှိတယျလဲ ထငျသှားမှာပါ။ငှကွေေးဆိုတာ အိမျထောငျ တဈခုမှာ အကွီးဆုံးစိုးရိမျရမယျ့အရာပါ။ အဲဒါကွောကျ့ ဘာပဲဖွဈနနေေ သငျ့ယောကျြားနဲ့ ရငျဆိုငျဖွရှေငျးတာ အကောငျးဆုံးပါ။ လြှို့ဝှကျခကျြ တှဟော အိမျထောငျရေး ကို ဖကျြဆီးပဈနိုငျပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျး နပေါလို့ အကွံပေးပါရစေ။